N’Golo Kante oo iska fogeeyey wararka la xiriirinaya kooxda Real Madrid… (Muxuu yiri?) – Gool FM
N’Golo Kante oo iska fogeeyey wararka la xiriirinaya kooxda Real Madrid… (Muxuu yiri?)
(London) 26 Maarso 2019. Laacibka khadka dhexe ee Chelsea N’Golo Kante ayaa iska fogeeyey warka la xiriirinaya inuu u dhaqaaqi doono suuqa xagaaga kooxda Real Madrid.
Kante ayaa ka mid noqday xiddigaha sare ee la la xiriirnayo kooxda Real Madrid oo doonaysa inay dib u dhis ku sameyso shaxdeeda xagaagan, kaddib markii uu hoggaanka kooxda dib ugu soo laabtay macallin Zinedine Zidane.
Xiddigaha Kylian Mbappe, Neymar, Sadio Mane iyo laacibka ay Kante isku kooxda yihiin ee Eden Hazard ayaa dhammaantood la fahamsan yahay inay diiradda u saaran yihiin Real Madrid, halka macallin Zidane sidoo kale la aaminsan yahay in uu xiddigan Kante u doortay inuu noqdo musharraxa ugu fiican ee uu ku xoojin karo khadkiisa dhexe.
Yeelkeede, Kante ayaa soo jeediyey inuu si buuxda diiradda saarayo kooxdiisa Chelsea kuwaasoo ganaax wajahaya labo suuq kala iibsiga xiddigaha ah.
“Waxaan ku jiraa Chelsea, weli waxaan doonayaa inaan halkaan joogo, kuwa dhahaya meelo kale muhiim ma’ahan, taasi ma’aha muhiim, aniga waxaan joogaa Chelsea, waxaana diiradda saarayaa middaas.” ayuu yiri Kante sida laga soo xigtay RTL.
Juventus ayaa sidoo kale la la xiriirinayay inuu u dhaqaaqi doono xiddigan reer France, kaasoo 132 kulan u saftay Chelsea tan iyo markii uu sanadkii 2016-kii kaga soo biiray kooxda Leicester City.